Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxii Uguweyna Afrika oo kasocda Addis Ababa- Muslimiinta Ethiopia.
Banaanbaxii Uguweyna Afrika oo kasocda Addis Ababa- Muslimiinta Ethiopia.
ADDIS ABABA OO AMAANKI LUMAY CIIDAMADA WOYANAH OO WADOYINKA XIDHAY MAGALADA ADDIS ABABA
Magaalada Addis Ababa oo Banaanbax aad u weyn ka bilowday. Banaanbaxan ayaa waxaa isugu soo baxay shacabka Muslimiinta ah ee Ethiopia waxaana banaanbaxan markii ugu horeeyay taarikhda wadanka Ethiopia ku weheliya Shacabka Kiristaanka ah ee Ethiopia oo si wada jir ah uga hortagay Gumeysiga taliska TPLF uu shacabka Islaamka ah uga qaaday xuquuqdi noloshooda iyo Diintooda Islaamka ah.
Shacabka muslimiinta ee Banaanbaxa Wada ayaa waxay iska horyimadeen Ciidamada Comandosta ee u adeega Woynaha kuwaas oo xabad iyo qoryaha dadka lagu garaaco la dhacaya dadka mudaharadaya. Muslimiinta banaanbaxaysa ayaa dhinacooda isku difaacaya dhagaxaan ay ku tuurayaan iyo waxkasta oo ay ku hor istagai karaan ciidamada gumeysiga.
Banaanbaxa kabilowday Magaaalada Addis Ababa ayaa kii ugu weynaa ee ka dhaca Afrika, waxa uuna ka weynyahay banaanbaxii ka dhacay Tahriir Suqare. Bananabaxa ayaa waxa uu ka socda Piasa, Suuqa weyn ee Markato iyo goobo badan oo ay ku yalaan masaajida muslimiintu ay ku tukadaan.
Gumeysiga Ethiopia ayaa dhinacooda ka daabulaya waxii ay xoog ku qabsan karaan oo banaanbaxa ayaa kolba koox ay xoog kusoo jiidanayaan kuwaas oo baabuur lagu daabulayo. Balse shacabka Muslimiinta ah ee banaanbaxa taagan ayaa arintaas wax cabsi ah ku heyn oo sii wata banaanbaxooda. Waxaa banaanbaxa ay dadku taaganyihiin iyada oo Roob aad uweyn uu ka dayo magalada Addis Ababa.
dhinaca kale magaalada Diridhaba ayaa muslimiinti ku tukanaysay masaajida ayaa waxa lagu soo waramaya in loo diiday inay masaajida fadhiistaan. Iyada oo laga cabsanayo in Muslimiintu markay Salaada isugu yimadaan ay kuwada tashadaan kana horyimadan Gumeysiga lagu hayo ummada Islaamka ah. Waqtiga ramadaanta ayaa ah waqtiga ummada Islamaku ay masaajida soo camiraan si ay ugu tukudaan.
Hadaba Muqaalkan hoose oo TV-ga mucaradka Ethiopia lagusoo saaray dadkii oo mudaharadaya hoos ka daawo.